Akhriso: Xaaskeygu kuma dhacdo in dadka dhexdiisa ay iigu yeerto magaceyga saxda ah | Wakaaladda Wararka Hiilnews
Akhriso: Xaaskeygu kuma dhacdo in dadka dhexdiisa ay iigu yeerto magaceyga saxda ah
khamiis, july, 12, 2018(HNN) Bal sawiro adigoo ka degay madaar dadku ku badan yihiin oo ku yaal Yurub ama Maraykanka, oo ay kugu sugayso xaaskaagu, (Layla magaceeda aan ka dhigno) oo intay shaqadii ka soo rawaxday daqiiqado soo yara daahday. Adigoo ku sugaya makhaayad oo ku foorara telefoonkaaga inta aad isku ilawday aan madaxba kor u qaaday hadii ay meel fog kaa aragto.
Waxase ku adag in ay magacaaga ku dhawaaqdo si ay kuu soo jeediso sababtu waxa weeye haddii ay kuu dhawaaqdo waxa argagaxaya oo kala yaacaya dadka goobta jooga. Ciidamada nabad gelyaduna adoon is ogayn ayay isku kaa gedaami. Qofkaagii muwaadinka daacadda ah ee sharciga dhawrayey ayaa lagu gayn qol yar oo gaar ah oo saacado dheer su’aalo lagugu waydiin.
Haddaba dhibku muxuu yahay? Xaaskaaga ayaa ah qof Muslim ah, magacaaguna waa Jihaad.
Maxaa dhacaya marka waalidkaa uu kuu bixiyo magac dadka cabsi gelinaya ama ka nixinaya dad badan oo ku nool waddamada reer galbeedka?
BBC-da ayaa wareysatay saddex nin oo dhammaantood wadaaga magaca Jihaad. Midkood waa dhakhtar ka hawlgala Chicago, midna waa jilaa caan ah oo u dhashay dalka Suuriya, halka midka saddexaad uu yahay injineer da’ yar oo ka soo jeeda Falastiin balse ku nool London.
Waddamada looga hadlo luuqadda Carabiga, magaca Jihaad waa mid iska caadi ah oo aad u bixin kartid cannugaaga. Wixii ka horreeyay weerarkii Mareykanka lagu qaaday 11 Sebteembar 2001 iyo dagaalkii xigay ee loogu magac daray dagaalka ka dhanka ah argagixisada, magacaasi waxa uu la mid ahaa magacyada kale ee dadka balse laga billaabo xilligaasi, dadku waxay magacaasi u arkeen mid xambaarsan dil.
Jihaad Cabdo, waa mid ka mid ah jilaayaasha caanka ah ee reer Suuriya. Magaca Jihaad ayaa ahaa midka ay dad badani ku barteen ee uu ku soo caan baxay, midka ay mas’uuliyiinta aadka u daba socdeen iyo xitaa midka sababay in baabuurkiisa la burburiyo mar loo arkay in wargeyska Los Angeles Times uu ku dhaliilay dowladda Suuriya.
Cabdo ayaa lagu khasbay in uu telefishin siiyo wareysi uu ku taageerayo dowladda madaxweyne Asad ee Suuriya balse waa uu diiday kaddibna dalka ayuu ka cararay.
Mareykanka ayuu miciin biday balse markiiba magaciisa ayaa noqday caqabad hor leh.
“Waxaan u soo cararay Mareykanka bishii Oktoobar sanadkii 2011,” ayuu yiri Cabdo.
“Gaar ahaan waddaamda ku yaal bartamaha galbeedka, marka ay maqlaan in Jihaad uu yahay magaceygu, markiiba waxa maskaxdooda ku soo dhacaya dad is qarxinaya iyo ragga jihaad doonka ah ee ciidamada ku weerarraya Afqaanistaan iyo Ciraaq.”
Cabdo oo barnaamijka ugu caansan ee uu Taleefishin ka soo jeediyo ay ku xiran yihiin 50 milyan oo qof ayaa go’aansaday in uu magaciisa lumiyo si uu ugu sii shaqeysto xirfaddiisa.
“Waxaan dareemaa sida qof leh magac lid ku ah magacani uu ugu noolaan karo waddankeyga, sida magac aan aad uga cabsanno. Waligii meel kama gaarayo xirfaddiisa madadaalada,” ayuu yiri Jihaad Abdo.
Waxaa uu sheegay in uu go’aansaday in uu magacani iska badalo si uu u badbaado.
“Anigu waxaan isu arkaa nin furfuran, sidoo kale xaaskeyga. Kama fikirno magacyadan iyo wax la mid ah laakiin waxa aan daneynayo ayaa ah hadafkayaga iyo halka aan tiigsaneyno.”
Markii uu iska badalayay magaca ayaa waxa uu damcay in uu la baxo magaca Jude balse markii dambe wuxuu qaatay magaca Jay oo ah magac gaaban dadka Mareykankuna ay aqbali karaan.
Balse sida uu sheegayo qoyskiisa ayaa magacan u arka wax la yaab leh.
Balse waa ay dareemayaan sababtoo ah sidan oo kale ayaa sannado ka hor ku dhacday dadkii watay magaca Cusaama. Dalka Ruushka, magaca Koba dhib ayaa lagala kulmay markii uu dhintay Stalin iyo Jarmalka oo magaca Adolf dhib lagala kulmay.
“Anigu ma doonayo in dhibaato ay iga soo gaarto magaceyga, aniga oo niyad ahaan ka duwan waxa la ii maleynayo,” ayuu yiri Cabdo.
Jihaad Cabdo oo 55 jir ah ayaa wali magaciisa dhabta looga yaqaan gudaha Suuriya iyo guud ahaan waddamada bariga dhexe. Waxaana saaxibadiisa jooga Mareykanka ay qaarkood ku gacan seyreen magaciisa cusub ee Jay.
Arrintan ayaa ah mid sidoo kale soo martay Jihaad Shoshara oo 49 jir ah. Waxa uu inta badan noloshiisa ku soo qaatay Chicago, waana dhakhtar ku takhasusay cudurrada ku dhaca dhallaanka.
Jihaad aabihii waxa uu ka soo jeeday magaalada Dimishiq ee Suuriya balse hooyadii ayaa ahayd qof Ameerikaan ah balse asal ahaan ka soo jeedda Mexico. Waxa uu in badan dhibaato kala kulmay magaciisa oo xitaa markii uu ciyaalka ahaa uu dareemayay.
“Gudaha waddamada Suuriya iyo Lubnaan, iyo xitaa dhulka Shaam guud ahaan, ma ahan sida magaca Jacob oo caadi ka ah magaca qof afraad iyo shanaad, balse ma ahan magac naadir ah oo xitaa waxaan arkay dumar la yiraahdo Jihaad. Ma ahan mid ku kooban muslimiinta oo waxaad arkeysaa qof masiixi ah oo magacaasi la yiraahdo”.
Jihaad Shoshara ayaa sida jilaaga reer Suuriya waxa uu isna la baxay magaca Jay.
Lahaanshaha sawirkaJIHAAD SHOSHARA
“Marka aan dhiganayay iskuulka sare iyo xitaa machadka, waxaan isticmaalayay magaca Jay. Ma qarin jirin magaceyga caadiga ah balse waxaan doonayay in aanan indhaha dadka isku soo jeedin oo aanan dhibaato la kulmin.” Ayuu yiri.
Shoshara waxa uu aad wali u xasuustaa sababta uu u doorbiday in magaciisa dhabta ah loogu yeero.
“Waxaan markaasi ka soo qalin jebiyay jaamacadda, waxaana muddo sannad ah ay u dhaxeysay markii aan galayay machadka iyo kan tababarka dhakhtarnimo. Waxaan xilligii fasaxa ku qaatay in aan caawiyo carruurta deegaanada aan aadka loo daryeelin. Marka aan halkaa imid ayaan magaceyga u sheegay carruurtii halkaa ku jirtay. Waa ay yaabeen balse waxaan is iri, haddii cannug siddeed jir ah uu magaciisa sheegi karo, adiga maxaa kuu diidaya.'”
Haddase magacan ayaa waxa uu leeyahay wuxuu noqonayaa mid durbaba muran dhaliyo.
Inkastoo mid kastaa uu sabab gooni ah sheeganayo, haddana labadani nin ee wadaaga magaca Jihaad waxa ay leeyihiin magacayaga ma jeclin in aan carruurtayaga u bixinno.
Jihaad Cabdo isuma arko nin ehlu diin ah, balse Jihaad Shoshara waxa uu sheegayaa in uu ku dadaalo sidii uu u noqon lahaa qof Muslim ah oo u hoggaansama awaamiirta islaamka. Shoshara, wuxuu ka shaqeeyaa hay’ad samafal oo dhanka caafimaadka ka cawisa qaxootiga reer Suuriya ee ku dool dalka Urdun.
‘Ma ahan garkii Muslimiinta!’
Ninka ugu da’da yare e ay BBC-du la hadashay ayaa ah Jihaad Fadda oo 32 jir ah, waxa uuna ku doodayaa in magaciisa uu sii xumeynayo xiriirka kala dhaxeeyo diintiisa, sababo la xiriira fikirka ay magacani dadka ka qabaan.
“Anigu ma ahi qof aad ahlu diin u ah, marka waxaa jira su’aal ah xaggee baan isku xisaabaa? Waan ogahay in diintu ay door muhiim ah ku leedahay nolosheyda balse wali go’aan ma gaarin,” ayuu yiri.
Jihaad Fadda oo asal ahaan ka soo jeeda Nablus oo ka tirsan daanta galbeed ee Falastiin ayaa Britain yimid muddo toddobo sano ka hor ah si uu u qaato shahaadadiisa mastarka ee injineernimada, waxa uuna ku faraxsan yahay magaciisa oo markii horeyba loogu magac daray awowgii.
Lahaanshaha sawirkaJIHAAD FEDDA
Sida rag badan oo reer London ah oo da’doodu tahay soddomeeyo, Jihaad Fadda waxa uu leeyahay gar weyn.
“Haddii aad tahay Muslim oo aad aragtid garkeyga, waxaad ogaaneysaa in uusan ahayn garkii Muslimiinta waayo mulsimiintu shaaribada ma deystaan. Waa wax ay muslimiintu u arkaan mid aan nadiif ahayn.”
Muslimiinta ayaa dhibaato badan kala kulma groomada diyaaradaha balse Jihaad Fadda waxa uu isu arkaa mid aad u nasiib badan.
“Waligey wax sidaa u xun iguma dhicin balse in mararka qaar si gooni ah laguula baxo waa wax iska caadi ah,” ayuu yiri.
Waxa uu iska ilaaliyaa in uu carabi ku hadlo marka uu ku sugan yahay gudaha garoonka diyaaradaha, waxa uuna sida sahlan ee uu u safro u aaneynayaa xaaskiisa oo aan xijaab xiran ama madaxa aan dedan.
“Haddii aan isweyno aniga iyo xaaskeyga, marna dadka dhexdiisa iiguma dhawaaqeyso meel kastaa oo aan joognaba,” ayuu sii raaciyay Jihaad Fadda.
Sida uu sheegayo xaaskiisa ayaa marka ay rabto in ay u wacdo waxa ay ugu yeertaa magacyo naaneys ah waayo magaciisa ayaa ah mid ay dadku ka baqayaan.